ओप्पोले नयाँ सेल्फी एक्स्पर्ट एफथ्री प्लस सार्वजनिक गर्दै » खबरहरुको एउटै केन्द्र
ओप्पोले नयाँ सेल्फी एक्स्पर्ट एफथ्री प्लस सार्वजनिक गर्दै
शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०७:२६ मा प्रकाशित !
११ चैत, काठमाडौँ । ओप्पोले काठमाडौंमा नयाँ सेल्फी एक्स्पर्ट एफथ्री प्लस सार्वजनिक गर्दै गु्रप सेल्फी ट्रेन्डको सुरुआत गरेको छ। एफथ्री प्लसमा ब्रान्डको पहिलो डुअल सेल्फी क्यामेरा रहेको जनाउँदै कम्पनीले यसमा एक सय २० डिग्री वाइड एंकलसहितको गु्रप सेल्फी क्यामेरा उपलब्ध रहेको जनाएको छ।
पहिलो चरण अन्तर्गत भारत, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम र म्यानमारमा कार्यक्रम आयोजना गरी कम्पनीले नयाँ फोन सार्वजनिक गरेको कम्पनीको भनाइ छ। कार्यक्रममा ओप्पोका लागि नयाँ ब्रान्ड एम्बेसेडर युथ आइकन तथा बलिउड स्टार दिपिका पादुकोण र लोकप्रिय फोटोग्राफर डब्बु रत्नानीले आफ्नो सेल्फी अनुभव पनि साटेका थिए।
कम्पनीले नेपाली बजारमा ओप्पो एफथ्री प्लस बिक्रीका लागि शुक्रबारदेखि प्री बुकिङ सुरु गर्ने जानकारी दिएको छ। यसले क्रान्तिकारी डुअल सेल्फी फ्रन्ट क्यामेरामार्फत उत्कृष्ट र गुणस्तरीय सेल्फी लिन सघाउने कम्पनीको दाबी छ। कम्पनीले नयाँ फोनमा सेल्फीका लागि १६ मेगा पिक्सेल क्षमताको क्यामेराका साथै गु्रप सेल्फीका लागि १ सय २० डिग्री वाइड एंगल लेन्स रहेको क्यामेराले गुणस्तरिय तस्बिर लिन सघाउने कम्पनीले जनाएको छ।
फोनमा कम्पनीले चार हजार एमएएच क्षमताको ब्याट्री रहेको भन्दै यसले दुई सय ८४ घण्टाको स्ट्यान्डबाई टाइम दिने दाबी गरेको छ। कम्पनीका अनुसार प्रयोगकर्ताले मात्र पाँच मिनेट ब्याट्री चार्ज गरी दुई घण्टासम्मको टक टाइम पाउन सक्छन्।
वैज्ञानिकले यस्तो औषधीको पहिचान गरे, जसले कपाल झर्न रोक्छ
PREVIOUS POST Previous post: घाइते भएकी महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु
NEXT POST Next post: स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका आउदै
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०७:२६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०७:२६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०७:२६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०७:२६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०७:२६